Miantsoa fiara any Soeda
Ny hahatonga fitsangatsanganana tsy hay hadinoina tany Soeda dia nofinofy maro. Mba hahitana ireo toerana rehetra sy ny fitsidihana ny zaridaina tokana ao amin'ny firenena dia tokony hikarakara ny fitaovam-pitaterana mialoha ianao. Ho an'ny maro, manofa fiara any Soeda dia safidy tsara, satria mamaha ny olan'ny fiankinan-dàlana amin'ny fiara fitateram-bahoaka sy ny fandaharam-potoana amin'ny fitaterana an-drenivohitra sy ny intercity.
Karazana fiara amin'ny fiara ao Soeda
Na dia mora aza ny manofa fiara, misy hevitra vitsivitsy mila fantarinao mialoha:
Ny fiofanana fiara dia mahazo alalana amin'ny 18 taona, ary ny sasany (sarotra sy sarotra ny manara-maso) - 24 taona monja, ary ny traikefa amin'ny fiara dia tokony farafahakeliny 3 taona;
Amin'ny ririnina tsy misy ny traikefa sarotra takiana afaka mandà ny hofaina noho ny fahasarotan'ny faritra sasantsasany amin'ny lalana soedoà;
ny fitsipiky ny lalana eo amin'ny lalana soedoà dia tsy mitovy amin'ny antsika, fa ny fandikana eto dia henjana kokoa. Izany no antony tokony hanadinoanao ny fandrobana ny fiara sy ny fiara ao anaty tosi-drà;
Ny fampiasana sy ny fitaterana ireo mpitsikilo radara dia voarara tanteraka.
Ahoana ny fandaminana fiofanana fiara any Soeda?
Lisitr'ireo antontan-taratasy ho an'ny mpizahatany te-hanofa fiara dia toy izao manaraka izao:
Fandevenana na antontan-taratasy hafa manaporofo ny maha izy azy.
Karatra fitakiana vola misy vola ampy hanamboarana azy ireo ao amin'ny kaonty ho fiantohana fiara voavoatra.
Fahazoan'ny mpamily. Mifototra amin'ny Fifanarahana Vienna, afaka miaro ny zon'ny olona iray ny manolotra tahirim-pirenena, fa tsy dokam-barotra iraisam-pirenena.
Ny vidin'ny fanofana fiara any Soeda
Amin'ny ankapobeny, afaka manofa fiara any Soeda ianao amin'ny vidiny mitovy amin'ny firenena eoropeanina hafa. Ny vidin'ny mpandoa hetra dia 110 dolara isan'andro, nefa ny vidiny farany dia miovaova arakaraky ny zavatra maro samihafa, toy ny:
class of the car;
ny fiantohana amin'ny halatra sy ny loza;
ny fisian'ny fiara fitaterana ankizy (hatramin'ny 135 cm ambony);
kofehy manokana ho an'ny skis;
kofehy amin'ny kodiarana ho an'ny ririnina;
ny mety hisian'ny mpamily faharoa.
Aiza no tsara kokoa ny manofa fiara?
Azonao atao ny mamandrika fiara ho anao talohan'ny nahatongavanao teto amin'ny firenena. Mba hanaovana izany, ny mpamatsy tsirairay ao amin'ny tranokala dia manana endrika famandrihana amin'ny aterineto, mameno azy, afaka mahavonjy manokana ary tsy manahy momba ny fitadiavana orinasa fiantohana fiara rehefa tonga eto Soeda. Raha te-hifidy mivantana ny fiara ianao, dia azonao atao ny mifandray amin'ny biraon'ny orinasa rehetra izay manome tolotra toy izany.
Fitsipika ankapobeny ho an'ny fifamoivoizana any Soeda
Raha mijanona ao amin'ny faritry ny fanjakana, tokony hifanaraka amin'ny fitsipika sasany ny fiara. Ny fanitsakitsahana azy ireo dia mandrahona amin'ny fandoavam-bola sy fandaniam-potoana, izay azo ampiasaina amin'ny tombony:
Ao an-tanàna, ny haavon'ny fiara dia tsy tokony hihoatra ny voalaza amin'ny famantarana 30-60 km / h.
Ny tanàna dia avela hivezivezy 70-100 km / h.
Ny lalam-be miavaka manokana dia manome ny fihazakazan'ny fiara haingana amin'ny 110 km / h.
Ao amin'ny trano fialofana dia tokony misy kitapo voalohany, famantarana famantarana mitatao haingana, afo mpamono afo, tariby mivezivezy, akanjo lava misy taratra.
Mila kalesy ny ririnina.
Amin'ny andro rehetra dia tokony hipoitra ny tebiteby.
Ny ankizy latsaky ny 7 taona dia tokony ho seza manokana ary ho tapahina, ary koa olona mipetraka.
Albania - fialam-boly
Islandy - fizahan-tany
Bosnia sy Herzegovina - Tendrontany
Inona no havoakan'i Andorra?
Jojoba menaka - fampiharana
Ny zaza tsy matory amin'ny alina - inona no tokony hatao?
Sakafo trondro - recipe
Sapioexuals: fanoloana mendrika ho an'ny lehilahy brutal
Indometacine - analogs amin'ny fanomanana
Fiakaran'ny akanjo-ririnina 2014-2015
Salady misy kirany sy menamena
Karazana mandeha amin'ny ski
Ireo famantarana 9 ireo dia manondro fa tsy misy proteinina ny vatanao
Mety ho toetran'ny tsy fahampian-tsakafo ve izany?
Pastil ao anaty lafaoro
Kostyanika - toetra mahasoa